केटाहरु कस्ती केटी भनेसी हुरुक्कै हुन्छन् ? |
स्वास्थ्य / शैली मंगलबार, ८ चैत, २०७३
युवकलाई कस्ती युवती मनपर्छ ? यो प्रश्न हरेक युवतीको मनमा हुने गर्छ । युवतीहरुलाई धेरै डिमाण्डिङ हुने गर्छन् तर युवकहरु पनि यस्ता कुरामा पछि छैनन् । एउटी प्रेमिका बनाउँदा एउटा युवकले आफ्नी प्रेमिकाबाट धेरै कुरा अपेक्षा गरेको हुन्छ । युवकहरु चाहान्छन् आफ्नी गलफ्रेण्ड अन्यन्त राम्री र कुरा बुझ्ने होस् ।